Fanontaniana 24 apetraka alohan'ny hamelanao ny zava-drehetra hanomboka fiainam-baovao - Blog
Fanontaniana 24 hapetraka alohan'ny hamelanao ny zava-drehetra hanomboka fiainam-baovao
Ka mieritreritra ianao fa mety ho fotoana izao hanombohana toko vaovao amin'ny fiainanao, na angamba boky vaovao iray hafa mihitsy aza.
Ianao dia mihevitra ny handao izay rehetra fantatrao ao aorianao ary manomboka fiainam-baovao iray amin'ny toerana hafa tanteraka.
Mieritreritra ny hifindra any amin'ny tanàna vaovao ianao, na mety ho firenena vaovao mihitsy aza.
Nahazo fiainana efa niorenan'ny misy anao izao ianao, saingy misy zavatra manosika na misarika anao handray ny dingana ary hanao ny iray amin'ireo fanovana lehibe indrindra azo atao.
Mazava ho azy fa tsy fanapahan-kevitra horaisina maivana ity.
Fanapahan-kevitra izany izay hitondra fiovana lehibe amin'ny làlana iray manontolo horaisin'ny fiainanao manomboka eto.
Ary mampientam-po tokoa izany, fa mety ho be loatra koa.
Raha misimisy sy diso ianao amin'ny zotram-pitondrantena mety, na resy lahatra ianao fa nandray ny fanapahan-kevitra mety nefa te-hahazo antoka fa mahay mandanjalanja ianao dia tonga ny fotoana hikarohana fanahy.
Mila manontany tena ianao amin'ireo fanontaniana lehibe, ary omeo ny tenanao marina valiny.
Rehefa dinihina tokoa, fanombohana vaovao dia mety hahagaga, saingy tsy dia mandeha amin'ny zaridaina velively. Hiatrika fanamby ianao.
Misy ny fanontaniana tokony apetrakao amin'ny tenanao alohan'ny handraisanao azy, ary ho hafa ny laharam-pahamehan'ny tsirairay.
Ireto misy fanontaniana vitsivitsy manandanja indrindra izay hanampy anao hahazo mazava ny zavatra tena tadiavinao, ary ny fomba hiasa eo amin'ny sehatra azo ampiharina sy ara-pientanam-po amin'izay ianao vonona ny amin'izay ho voatahiry.
1. Inona no manosika anao?
Inona no tsy mahafaly anao amin'ny toerana misy anao izao?
Ny olona? Ny fotoana ahafahana miasa? Ny fomba fiaina? Ny toetrandro?
Misy zavatra fotsiny ve momba ny tranonao ankehitriny izay tsy mety, na voatosika hiala ianao?
inona ny fiarahana amin'ny fiarahana
Zava-dehibe izany tsy handositra ny olanao , satria raha avelanao ho voavaha ny zavatra dia mety hanaraka anao na aiza na aiza alehanao izy ireo.
2. Inona no misarika anao?
Misy zavatra momba ny toerana ao an-tsainao ve izay manintona anao any?
Na dia mety nametraka pin fotsiny tamina sari-tany ianao, ary misy olona miakatra fotsiny sy mihetsika rehefa mandray azy ny toe-tsaina, dia mety tsy fanapahan-kevitra tampoka noraisinao izany.
Misy antony anaovanao azy io, ary misy antony iray, miaraka amin'izao tontolo izao malalaka azonao, dia nisafidy io toerana manokana io ianao.
Mety hifindra toerana ianao, na mety hifindra amin'ny toerana hafa.
Raha izany no izy dia manontania tena raha efa nieritreritra ny hifindra any amin'ilay toerana ianao raha tsy noho io zavatra manokana io no nisarika anao tany.
Raha misy antony hafa mifindrao ireo, ireto dia hanampy amin'ny fanerena tsindry kely amin'izany asa na fifandraisana nofinofy izany, izay mety hiady amin'ny fanatanterahana ny zavatra antenainao.
fomba mahafatifaty hanaitra ny sakaizanao
3. Afaka mahita ny tenanao mipetraka any ve ianao?
Ao an-tsainao, azonao sary an-tsaina ve ny tenanao mipetraka any?
Azonao alaina sary an-tsaina ve hoe toa inona ny tranonao ary inona no azonao atao amin'ny faran'ny herinandro?
Rehefa mieritreritra an'izany ianao dia toa tena misy sy azo tsapain-tanana ve izany sa sahirana ianao maka sary an-tsaina ny tenanao any mihitsy?
4. Inona no misakana anao?
Ny valin'io dia mety ho 'tsy misy', fa raha mamaky an'ity ianao dia mety mbola tsy resy lahatra fa ny famelana ny zava-drehetra no lalana mety aminao…
… Ary mety hitranga izany satria misy olona na zavatra misakana anao.
Ataovy marina amin'ny tenanao ny momba izany, ary eritrereto raha toa ianao ka manaiky hamela azy hitarika ny fiainanao na tsia.
5. Hafiriana ianao no nanonofy momba an'io?
SASANY fanahy afaka mandray fanapahan-kevitra mandritra ny alina, ary izany dia mety ho fomba mahafinaritra hiainana fiainana raha vonona ny hiatrika ny vokany mety hitranga ianao.
Na izany aza, raha mikarakara bebe kokoa ianao pisaorana noho ny fikarakarana maimaim-poana , eritrereto hoe mandra-pahoviana ianao no nanonofy momba an'io.
Manginy fotsiny ve izay ho adinonao ao anatin'ny herinandro vitsivitsy, sa zavatra efa niboiboika nandritra ny taona maro, izay nahazoanao fotoana farany hanaovana zavatra?
6. Ahoana no hamatsiana vola ny fiainanao vaovao?
Mety hanao ilay hetsika manokana ianao SATRIA amin'ny asa iray ary tsy mila miahiahy be loatra amin'ny lafiny ara-bola.
Fa raha tsy izany ianao dia ity no iray amin'ireo ahiahinao voalohany.
Manana tahiry ve ianao hampiatoana anao raha toa ka mila fotoana fohy vao mitady asa?
Mikasa ny hiaina amin'ny tahiry mandritra ny fotoana fohy ve ianao, ary hiala sasatra tsara?
Manana hevitra momba ny tsenan'ny asa any ve ianao?
Mety ve ny fahaizanao?
Ahoana ny fomba ahitanao asa?
Manana ny fahaizana miteny ilaina ve ianao?
7. Hahomby ve ny asanao? Zava-dehibe aminao ve izany?
Raha laharam-pahamehana ho anao izao ny asanao, mety ve izany fihetsika tsara izany amin'ny fotoana maharitra, sa manahy ianao sao hanenina noho izany?
Na, manana asa matanjaka izay afaka mandroso amin'izao fotoana izao ambany dia ambany amin'ny anao lisitry ny laharam-pahamehana ?
Izay ny zonao sy ny safidinao tena manan-kery tokoa, satria be lavitra ny fiainana noho ny miasa…
… Fa mariho fotsiny amin'ny tenanao ny momba ny hetahetanao, ary raha, raha te hiakatra an'io ‘tohatra fiasana io ianao’, ity hetsika ity dia hanampy anao amin'ny dingana manaraka.
8. Raha manana asa miandry anao ianao, azo antoka ve izany?
Raha miakatra sy mifindra asa ianao ary ihany ho an'ny asa, avy eo dia mila mahazo antoka ianao fa zavatra azonao ianteherana izany.
Fifanarahana vonjimaika ve sa maharitra? Inona no ho tsapanao raha tsy mandeha ny asa?
9. Aiza ianao no hipetraka? Miaraka amin'iza?
Te hiaina irery ve ianao? Raha izany dia hahatsiaro ho manirery ve ianao? Ho vitanao ve izany?
Te hizara trano na fisaka ve ianao? Ahoana no hahitanao ny iray? Efa nijery safidy ve ianao?
Zava-dehibe ny fananana hevitra mazava momba ny zavatra antenainao avy amin'ny toeram-ponenanao, ary raha tena misy izany.
10. Manana vola fanampiana vonjy taitra ve ianao?
Raha mandeha mankaleo daholo ny zava-drehetra, manam-bola ve ianao hanohanana anao?
Ny sasany amintsika dia tsara vintana fa manana fianakaviana afaka manafaka antsika raha ilaina izany, fa ny sasany amintsika kosa tsy.
Tahaka ny itiavan'ny fianakavianao anao dia mety tsy ho eo amin'ny sehatra ara-bola izy ireo hanampy anao raha mila izany ianao.
hatsiaka vato vs ny vatolampy
Noho izany, mila matoky ianao fa manam-bola voatahiry fa afaka miverina amin'ny toe-javatra maika ianao.
11. Manao ahoana ny vidin'ny fiainana ao amin'ny trano vaovao kasainao harahina?
Ambony kokoa ve ny vidim-piainana noho ny toerana onenanao ankehitriny? Ho vitanao ve izany?
Toy ny ahoana ny vidin'ny hofan-trano? Ho afaka hitahiry vola bebe kokoa noho ny ankehitriny ve ianao, na kely kokoa?
Inona ny vidin'ny fisakafoanana any ivelany, ary ohatrinona ny dia?
Tsy maintsy ahenao ve ny isan'ny fotoana laninao hisakafoanana isan-kerinandro, sa ho vitanao ny hamaha kely ny tadin'ny kitaponao?
Hatraiza ny maha-zava-dehibe ny fahaizana mivoaka sy mifanerasera aminao?
12. Misy fameperana visa ve?
Ity no ampahany mankaleo.
Tahaka ny itiavantsika rehetra ny fahafahantsika mandehandeha manodidna ity planeta tsara tarehy ity, ny sisintany sy ny visa dia indrisy fa mbola zavatra betsaka tokoa.
Raha mandeha any ivelany ianao dia ho afaka hahazo visa ho an'ny firenena voalaza?
Mandra-pahoviana io visa io no mamela anao hijanona any? Ho afaka hijanona maharitra ve ianao raha tianao izany?
13. Inona no atao amin'ny fitsaboana?
Tsy misy olona tsy mety maty, ka mila mazava tsara amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana alohan'ny handehananao na aiza na aiza.
Ny firenenao dia mety manana fifanarahana fifamaliana amin'ny firenena alehanao, fa amin'ny ankapobeny dia mila mahazo antoka ianao fa manana politikam-piantohana mifanaraka amin'izany, izay manarona anao amin'ny toerana izay halehanao sy ny hetsika izay hataonao.
14. Inona no ilaozanao?
Eritrereto ny zavatra rehetra anananao amin'ny fiainanao ankehitriny, na ny asanao, ny namanao, ny fianakavianao, ny tranonao, na ny mpiara-miasa aminao, ary manontania tena raha tena vonona hanome izany rehetra izany ve ianao.
Raha tonga amin'ity sehatra ity ianao dia mety ho eny ny valiny, saingy mila azonao antoka fa fantatrao tsara ny tena izy avelanao.
Rehefa dinihina tokoa, araka ny filazan'izy ireo dia tsy fantatrao izay azonao mandra-pahalany azy.
15. Inona no hataonao amin'ny entanao raha tsy eo ianao?
Ary miverina amin'ny fampiharana isika!
Saika azo antoka fa nanangona zavatra betsaka tamin'ny andronao teto amin'ity planeta ity ianao.
Inona no hataonao amin'izany?
Ento miaraka aminao daholo ve izany? Vonona ny hanao sorona toerana malalaka ho anao hitahiry ny fanananao ve ny ray aman-dreninao? Afaka mamela zavatra sasany amin'ny namanao ve ianao? Mila mandoa vola ve ianao amin'ny fitehirizana azy?
Ary, inona no ifandraisanao amin'ireo zavatra ara-batana rehetra ireo? Azonao atao ve ny mivarotra izay rehetra tsy tafiditra anaty valizy ary misokosoko amin'ny sasany fiainana minimalist ?
ahoana ny fatokisana indray amin'ny fiarahana
16. Mila mitondra entana be dia be ve ianao? Ohatrinona ny ho vidin'izany?
Raha mikasa ny hifindra hidin-trano, tahiry ary barika ianao, handray valizy marobe na fanaka mihitsy aza, ohatrinona ny vidin'izany rehetra izany? Ahoana ny fomba fiasa lojika?
17. Manana drafitra fanohanana ve ianao?
Alao an-tsaina hoe rava daholo izany.
Alao an-tsaina hoe tsy misy mivelatra amin'ny fomba tianao.
Inona no hataonao?
Hivily rambo ve ianao ka mody? Hifikitra aminy ve ianao ka hampandeha azy? Manana drafitra lehibe hafa ao an-tsainao ve ianao?
18. Manana tambajotra mpanohana amin'ny toerana ahafahanao mifandray ve ianao?
Ny hakanton'ny vanim-potoana maoderina dia na lavitra toy inona ny halaviranay amin'ny namantsika sy ny fianakaviantsika dia antso an-tariby na antso an-tsary fotsiny izy ireo.
Iza ireo olona fantatrao fa ho azonao ianteherana rehefa mila ny fanohanany ianao?
19. Miatrika tsara ny fanirery ve ianao?
Mampientam-po tokoa ny mifindra any amin'ny toerana vaovao, fa zava-misy ny manirery.
Afaka volana vitsivitsy ianao vao hahita ny tongotrao sy hahita ny namanao, ary ireo volana voalohany ireo dia mety ho manirery be.
Mety efa nifanena tamina olona ianao, saingy maharitra fotoana fohy ianao hananganana finamanana sy tambajotra mpanohana vaovao, izay midika fa hiafara handany fotoana be samirery ianao.
Ianao ve miatrika irery tsara?
Tsy zavatra mora ny miaina, fa ny olona sasany dia mahaleo tena kokoa sy mahaleo tena noho ny hafa.
Ny fanekena ny tolona ho irery dia tsy antony tsy handraisana ny dingana haingana, fa zava-dehibe fotsiny ny manantena ny volana voalohany ho somary masiaka, ary ho vonona ny handroso hatrany.
20. Misokatra amin'ny fahazarana ny kolontsaina vaovao ve ianao?
Ao an-tranonao vaovao, ny vintana dia tsy mandeha ny zavatra toa ny ataony avy aiza ianao.
Mila misokatra amin'ny fandraisana kolontsaina vaovao ianao ary mampifanaraka ny fomba fanaovan-javatra.
inona no heverina fa mamitaka amin'ny fifandraisana
Tsy milaza aho hoe mila manova tanteraka ny fomba fitondran-tena sy ny fomba fiasa ianao, fa mila misokatra amin'ny fanovana zavatra madinidinika mba hifanaraka amin'izay heverina ho fahalalam-pomba na ny fomba fandaminana ny fiainana ao amin'ny tanàna na firenena nofidinao.
21. Hanao ezaka ve ianao hahazoana namana vaovao?
Tsy ho tonga aminao fotsiny ny namana.
Mety tsy dia zatra loatra amin'ny kanto fanaovana namana ianao raha mbola tsy nifindra tany amin'ny toerana vaovao, fa mila vonona ny hivoaka any ary hanao ezaka.
Mety ho tafiditra amin'izany ny fandehanana amin'ny hetsika ara-tsosialy, fampianarana, fanaovana fanatanjahan-tena
Mila manery ny tenanao hanao tolotra fisakaizana amin'ireo olona tianao ianao manao ezaka hananganana ny fifandraisana .
Ekeo ny zava-misy fa ny ankamaroan'ny olona dia efa manana ny fiainany sy ny namany ary sahirana, noho izany ianao dia mety mila manao ezaka kely kokoa noho ny hieritreretanao ny hamoronana fifamatorana.
22. Mety ho avo loatra ve ny fanantenanao?
Nahazo antenaina tsy azo tanterahina momba ny zavatra hitranga ve ianao?
Azo antoka, mety hifindra any amin'ny paradisa ianao, saingy mbola hisy ny paty masiaka.
Ny tsara indrindra dia ny manantena fa ho mafy ny raharaha, koa raha mandeha mandamina tanteraka izy rehetra dia mahagaga izany.
23. Maharitra ve io, sa mandritra ny fotoana voafaritra?
Handeha 6 volana ve ianao? Herintaona? Telo taona? Angamba ianao, salama tsara, hijanona mandrakizay?
Hankany amin'ny toeran-kafa ve ianao sa hiverina any an-tranonao ankehitriny?
24. Raha tsy ataonao izany dia hanenina ve ianao?
Raha manapa-kevitra ny tsy handray ny dingana ianao, moa ve izany ho zavatra mijanona ao an-tsainao?
Afaka folo taona, hanenina ve ianao fa tsy nanararaotra izany fotoana izany?
Tsara kokoa ve ny manome azy tifitra ary potraka daholo, fa tsy manandrana mihintsy?
Tsy azonao antoka ny fomba hanombohana fiainana vaovao? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana anio izay afaka mitarika anao mandritra ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Ahoana ny fomba handresena ny tahotrao ny tsy fantatra
Asa ara-tsosialy 7 hafa ho an'ireo izay tsy manana namana akaiky
Ahoana no hahaleo tena ara-pihetseham-po ary hijanona tsy hiantehitra amin'ny hafa ho an'ny fahasambarana
Zavatra 28 tokony hatao rehefa any an-trano irery ianao ary mankaleo
Mpinamana firy no ilainao amin'ny fiainanao?
Maninona no zava-dehibe ny fiainanao indray andro any (miaraka amin'ny fomba fanaovana azy)
peyton royce sy billie kay
zavatra hatao raha mankaleo anao
inona no iantsoanao olona iray izay manome tsiny ny hafa ny hadisoany
ny vadiko mandainga momba ny zavatra kely
tononkalo famoizana olon-tiana